I-Interior design Bucharest - Nobili I-Interior design, studio, isakhiwo, umklami, izinkampani, ukuklama, amanani
Imiklamo yokwakha yangaphakathi ingaba usizo uma ubiza kusenesikhathi kumasevisi a ukuklama amafemu futhi Nobili Design Interior. Kanye neqembu labachwepheshe abanolwazi nabaqambi, ungayakha ikhaya lakho lephupho eBucharest ngaphandle komzamo omncane. I-Nobili Interior Design Architecture Company iyinhlangano yemakethe nemiklamo yokuklama design yangaphakathi si design yangaphakathi Izakhiwo ezisebenzayo zendlu, izindlu zokuhlala, izindlu zezindlu noma izindawo zokuhweba eBucharest kusukela ku-2008. Izixazululo ezenziwe ngabakhiqizi zisiza amakhasimende ukubona ngenye indawo ikamelo elilula, elingavumelani. Ikhasimende lingakhetha Izitayela zangasese zakudala, lwanamuhla, eclectic, baroque, iMedithera, noma ngisho nemigqa yezitayela zekamelo noma ngaphezulu kwendlu yayo eBucharest noma eminye imizi yaseRomania. Ngaphambi kokuqala iphrojekthi isakhiwo sangaphakathi sekhaya, indlu noma indlu e Bucharest, abaklami bangaphakathi bazosebenza ngokuningiliziwe ngemibono kanye nokukhetha komklayenti bese bezethula kumdwebo we-3D. Ngakho-ke, iklayenti lingakwazi ukubona, ukuhlaziya nokucubungula konke okuzoguqulwa ekwakheni kwakhe, kokubili ngaphandle nangaphakathi. Kuze kube manje, siziqhenya nge-150 imiklamo yokwakha yangaphakathi ngoba izindlu zakudala, izindlu zanamuhla nge-attic classical kanye nezinye izinhlobo zezakhiwo eBucharest, Ilfov kanye neminye imizi emikhulu eRomania. Iklayenti lingadlulisa amehlo iphothifoliyo yangaphakathi si design yangaphakathi ukuqonda kangcono ukuthi yimuphi umklamo wezakhiwo owakhiwayo nokubona amandla okuguqula ayithatha ingaphakathi design design futhi Nobili Design Interior. Ochwepheshe bethu ku design yangaphakathi izovula amehlo akho nengqondo futhi izokusiza ngamathiphu adingekayo ukuze uthole umphumela wokuphela ukukujabulisa. Sisebenza okuhle kakhulu abakhiqizi ensimini design yangaphakathi, ngakho-ke zonke izinto ezisuka ku-parquet, amathayili okugezela kanye ne-faience, I-porcelain igumbi lokuhlala tile, izibani zokukhanyisa, imishini yekhaya kanye ifenisha yesitayela yesitayela kuzoba izincomo eziphezulu ezivela abaklami. Kuye ngesabelomali sekhasimende, umuntu angakhetha izesekeli ezidingekayo ukuze adlulise igumbi lokuphumula lesitayela, igumbi lesikhathi samanje noma ngisho nekhishi le-eclectic. Isinqumo sinjalo, konke kuvela ekukhethweni komthengi, futhi iphrojekthi iphelile umklamo wangaphakathi eBucharest usezandleni zenkampani ekhethekile Nobili Design Interior. I-Nobili Interior Design yinkampani ekhethekile design yangaphakathi eliphethe amaphrojekthi we-50 wokuklama kwangaphakathi nokuklama eBucharest, Voluntari, Otopeni, Pipera, Snagov nase-Izvorani.